रेखा थापाजस्तै फिल्म बनाउँछु भनेर हल्ला गर्ने तर नबनाउनेमा निखिल उप्रेती पनि पर्छन्। सुरु गरेको फिल्म अलपत्र छ, बनेका फिल्मको कन्तबिजोग छ, तैपनि निखिल महिना/दुई महिनामा फिल्मको तयारीलाई लिएर समाचारमा आउन छुट्दैनन्।
यो हप्ता त्यस्तै भयो। उनले बनाउन लागेको फिल्म ‘आयो भैरव’ राजेश हमाललाई अफर गरेको खबरले उद्योग तात्यो। निखिल र राजेशको तस्बिर सँगै देखिएपछि नपत्याउने कुरा पनि भएन। तर, उनको इतिहास हेर्ने हो भने न यो फिल्म बन्छ, न राजेशले यो फिल्म खेल्छन्।
निखिलले दुईतीन वर्षअगाडि ‘भैरव’बाट कमब्याक गरेयता आधा दर्जन फिल्ममा काम गरिसकेका छन्। बीचमा उनले महँगो बजेटमा बलिउडका कलाकारसमेत ल्याएर ‘कमिटमेन्ट’ भन्ने फिल्मको सुटिङ सुरु गरेका थिए, तर त्यो फिल्म बीचैमा अलपत्र छ। देश-दुनियाँका कुरामा गफ दिने निखिलले जो–जो खेलाए पनि उनका सिनेमा हेर्ने दर्शक बाँकी छैनन् भन्ने चाहिँ किन नबुझ्या होला ? के भर्खरै उनी जस्तै एक्सन हिरो विराज भट्टले ‘साङ्लो’ कम नराम्रो बनाएका थिए ?
रेकर्डिङ जारी थियो...
१२ चैत २०७६
गृहमन्त्रीले माम्पीलाई सोधे ‘खोइ त बुलाकी?’
सपूत भए सद्भावना दूत
हरिवंशलाई रेडियो अन्नपूर्णको सम्मान
सिनेमाका कर्मठ ‘पाहुना’